Coronavirus, nzanga inomesa kana kuwana vanhu? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 23 March 2020	• 10 Comments
Iyo coronavirus sezviri pachena inounza kuomeswa kukuru munharaunda. Iwe unogona kuona kuti pakurwisa kwese kwema media media kune wese munhu anoshinga kutaura imwe pfungwa. Usaite chikanganiso. Mumakore anopfuura manomwe andakanyora, ndaona kuti huwandu hwemauto eruzhinji anomuwisira mabhatani ekhibhodi kuvanhu pama social media akakura kupfuura huwandu hwevarwi vakapfeka yunifomu. Ivo vangori pane shamwari dzako rondedzero uye vane shady zviitiko izvo zvinoita kunge zvisingabhadhare yakawanda, asi vanogona kuwana nekunyatsoita uye ikozvino vanopedza nguva yakawanda kumashure kwekhibhodi yavo. Ivo vane gava kubva kuhurumende here? Kugara kwekubatsira, mutongo wakaderedzwa?
Kana iwe ukaverenga bhuku rangu, iwe waona kuti chokwadi sezvatinoona icho chinesimba kwazvo nehuwandu hukuru hwevanhu vakatokanganiswa uye vatojairwa kubhadharwa nehurumende, sezvazvaizoitika kune wese munhu. mune tekinoroji yemakomisheni mamiriro ezvinhu iye zvino ari kubudiswa kunze. Muyo yaimbove GDR pasi peSoviet Union, kusati kwawa kweBerlin Wall, munhu mumwe chete muvazhinji makumi mashanu aive Inoffizielle Mitarbeiter (IMB). Wakafunga chaizvo kuti sisitimu iyi ingadai yakanyangarika muguruva rekabati kana rakabudirira zvakadaro? Tora tarisiro yakanaka yakakomberedza iwe.
Wese munhu akacherekedza mhedzisiro yedambudziko re coronavirus. Nyika ine makumi emabhirioni aripo panguva imwechete kuti vatore mari dzemihoro, kubatsira makambani anoshaya, uye kudzikisira mutero? Izvi zvinogoneka sei? Kwemakore, austerity yakasundirwa mukati uye zvino tapuro inogona kungozovhurwa zvachose! Isu tinopupurira pachivande kuunzwa kwemari yekutanga (senge pasi pechikominisiti). Mari yekutanga iyo Inoffizieller Mitarbeiter anogona kunge akavanzwa pachivande kwenguva yakareba.
Iyo isingatarisirwi kupa rubatsiro yenyika inogona kubva ku750 mabhiriyoni poto iyo iyo ECB yakadhindwat an. Nekudaro, pane imwe jar.
Mushure mechikamu chechina chegore ra4, zviuru gumi nemashanu zvemamiriyoni euros muhomwe yemari yepension yaive iripo pamari yese yepension. Mari hombe dzemupenjeni dzinosanganisira ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek), PBF BOUW (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouoniondsondsdndsndrendsonds. Pamwe chete vaive nezvavo 909 mabhiriyoni capital capital. Mari yemari yepension uye mamwe masangano ekudyara anopa huwandu hwekutengesa zvakanyanya paAmsterdam stock exchange.
Mari idzodzo yepension yakarohwa zvakanyanya nekudonha kwemisika yematoko panguva ye dambudziko iri. Ini ndinotsanangura zvakadzama kuti kurova uku kwakauya zvakadaro ichi chinyorwa.
Midhiya ikozvino inoshuma kuti hapasisina mari yakakwana mudzimba yekusangana nemabhenefiti ese avakavimbisa vatori vechikamu parizvino uye mune ramangwana. Avhareji yemari yekuenzanisa yakadonha kubva pa29 muzana kusvika 101 muzana mumazuva makumi matatu nemashanu (Zuva. Trouw akataura atove munaKurume 2). Izvi zvinoreva kuti kune masenti makumi maviri nemasere pamari yeyese inotsanangurwa pension euro. ECB parizvino yave ichipa mabheji ekutsigira QE (Kuwedzera zvishoma) kwemakore. Makambani mazhinji akakwanisa kuchengeta avo emitengo yezvitoro akakwira zvakakwirira, nekuti ivo vaitokwanisa kukwereta mari nguva dzingangoita zero zero uye bhangi repakati rakadzore chikwereti ichocho. Chero bedzi iwe uchinge uchitenga migawo yeayo, iyo mari haizopindi mumusika, asi inoramba iri mune yakasarudzika yevanosimudzira mari.
Zvino sezvo dunhu reDutch ririkupomba makumi emabhiriyoni muvanhu (izvo zvinofungidzira kuti zvinobva kuECB), mari iyi inoperera munharaunda. Mushure mezvose, iyo inopiwa sekutsigirwa kune vanhu vanozotenga chikafu uye zvinwiwa. Kana iwe ukadhinda makumi emabhirioni seQE uye izvi zvichiramba zvichitenderera mumitsetse yevanosimbisa masangano, hazvina zvazvinoita pakukosha kwemari muhupenyu chaihwo. Nekudaro, kana ukakwenenzvera makumi emabhiriyoni uye ukapa vanhu, zvinogona kungotungamira ku hyperinflation. Izvi zvinoreva kuti rutsigiro rwakavimbiswa parizvino ruchazorora kune vakawanda uye vamwe vanonakidzwa nekunzwa zororo rekugara pamba, asi izvo hazvichanakidze mushure mevhiki 1. Kana inflation ikarova, zvinongoerekana zvazoomera kuzadza imwe bhegi rekutengesa uye kudyisa miromo.
Ini handingashamisike kuona nyika yenyika dzemapension. Zvirokwazvo mukutarisa chokwadi chekuti mari dzepenjeni dziriwo muzvisungo zvehurumende (zvikwereti zvikwereti) zvakare uye kana hurumende ikawana mari kubva kuECB, vanova vasina kukosha zvakare.
Ini ndinofunga tave padhuze nekuchinja kuzere, kusimuka kubva (sekureva kwangu) bogus demokarasi kuenda kune tekinoroji komunharaunda manejimendi (dhijitari control system). Nzvimbo dzakasarudzika. Zvese zvataimboziva zvichachinja (kusanganisira mapenjeni). Makambani achakwenenzverwa, kwete zvakananga, asi nhanho nhanho uye munhu wese achagamuchira mari yekutanga. Mari iyoyo yekutanga inogona kungovimbiswa kana paine rese rese renyaya yemari system uye inofungidzirwa zvakare yakananga kune izvi. KuUS, takaona Donald Trump achizivisa matanho akafanana nezuro sezvakatorwa pano muNetherlands. Icho chiratidzo pamadziro.
Kana iwe uchida kuvimbisa mari yekutanga pasina mari iyi kuti ive isina kukosha nekuda kwehyperinflation, saka unofanirwa kunyatso kubvisa gomo rakakura rechikwereti chemari yakadhindwa. Uye nekupihwa kuti mari yepension vane hombe vane zvikwereti zvedunhu reDutch, mari yenhema mumari idzodzo yobva yapera.
Ikozvino handizive kana kubvisisa kwakanyanya kubvisa zvese zvikwereti kuchiitika, nekuti ipapo unofanirwa kubata bhangi rese nehurongwa hwemari pasi rese. Pakupedzisira, zvakadaro, ndinotenda kuti basa riri kuenda kune itsva yenyika yepasi rose system.
Zviri nyore kugadzira rairo idzva kunze kwemhirizhonga yakazara. Uye mhirizhonga idzi dzinozokura. Isu tichazotanga kupupurira kubviswa kwemari yepension neDutch state. Muchokwadi, kukwikwidza mari yepension hazvisi chinhu kunze kwekutenga yakawanda yakadhindwa mari yeapuro nezai, asi iyo nhamba iri muchivigiro chako mari ingangoita mazana mashoma emabhiriyoni kumusoro uye iwe unogona kupa yakawanda kure.
Kucheka nyaya refu mupfupi: Ini ndinotenda kuti hyperinflation ndiyo inozopedzisira yaburitsa vanhu vechiDutch kubva mukuvharirwa kwavo mutirongo. Hara!
Tichiri kuridzwa nevatori venhau uye vezvematongerwo enyika vanopfura mavhidhiyo avo vanhu vakavhiringidzika (Inoffizieller Mitarbeiter, IMB'ers) vanofungidzirwa kuti havachengete kusvika pakureba hwemamirimita 1.5 kuitira kuti vagoburitsa alibi yandaifungidzira kwevhiki mbiri: iyo coronavirus iri kubva mumaoko "nekuti isu tanyanyochinja" saka ikozvino tinofanirwa kuenda kunonyanya kuvhara kuvhara kupfuura kuFrance neSpain..
Iko kuvhaira kwakaoma saka inotengeswa kune mashesa. Panguva ino, isu tingaudzwawo kuti ndizvo coronavirus mutates uye kuti zvese zvinova nengozi zvakanyanya. Saka tiri kuenda kuzviwana mumamiriro ezvinhu apo munhu wega wega anotya mumwe wake uye kuti kana ukasangana nemunhu, izvi zvinogona kukuuraya. Saka, chero munhu anofamba akasununguka achive anokwanisa "kufa kuburikidza nemhosva" mhondi yakawanda.
Fungidzira mamiriro ezvinhu apo pane kusashanda munzvimbo dzekugovera kwemamwe maketeni ekutengesa. Fungidzira kuti maATM haabvumirwi kupa mari (nekuda kwengozi yekutapukirwa kubva kuhutachiona ihwohwo hutachiona hunotyisa) uye fungidzira hyperinflation, ipo Rutte akavimbisa mari yekutanga anongokupa chingwa chimwe chete pasvondo uye nechikwama chemapoto. Chii chichaitika ipapo? Ipapo vanhu vanonzwa nzara uye vobva vabuda mudzimba dzavo. Ipapo vavakidzani vavo vanozovazivisa, nekuti avo vanofamba vanokwanisa kukona corona nguva mabhomba njodzi kwavari ivo neese munhu wavanoziva. Uye ipapo uto rinofanira kupindira uye tichaona kuti vanhu vazhinji vanonyangarika. Icho hachisi chinhu chinotyisa, kufunga kune musoro.
Uyezve tinopupurira nyonganiso muEurope dzandagara ndichifungidzira. Uye panotungamira nyonganiso, pane simba idzva rinopinda kuti rironge zvinhu. Munoziva nyika yandiri mairi kufanozivisa kwamakore. Izvo zvese master script uye ini ndinorondedzera iyo tenzi script mubhuku rangu. Kana iwe wakaverenga bhuku iro uye zvinowedzera kune iro bhuku pano pane saiti, iwe unoziva kuti kune tariro. Asi izvozvo zvinotora kudzama. Kuona zviri kuitika ndezvechokwadi uye zvakanaka. Ipapo iwe unogadzirira uye iwe unoziva kune imwe nhanho iwe yaunogona kuita chimwe chinhu.
Source chinyorwa listings: nos.nl, trouw.nl, trtworld.com
Tags: kure, imwe nehafu, mari yekutanga, coronavirus, Featured, inflation, lockdown, mita, Rutte, kutsigira
23 March 2020 pa 10: 10
Pamusoro pezvemagariro enhau, umo munhu wese (anonzi) anoyambira kuti hapana munhu anotora mutoro wake uye haatevedzere zviga zve "vanonzi nyanzvi", pepanhau rizere neyevero zvakare nhasi.
Iyo teregiramu nyanzvi mukutyaira, inogadzira misoro nhasi misoro: BHUKU DZOKUDZIVA ”. Meya nevapengeri vanoyambira nekudyara kutya kuti Netherlands iri kuregedza zvikuru kuraira kweBig mukoma, nezvimwewo.
Vanhu vari kugadzirira iyo yakazara kuvhara uye ndiyo mhosva yedu.
Izvo zvinoshamisira (ndinofunga zvinoshamisa) kuti ini nedenderedzwa reshamwari (ini ndine denderedzwa rakakura reshamwari) handizive chero munhu angave kana anga aine corona, zvese zvinobva mupepanhau, Nieuwsuur, Youtube.
Zvinoshamisawo kuti vanhu vazhinji vane mukurumbira pasi rese vane corona, (hongu ivo havasi kufambisa maitiro sei ndofunga) zvinoita kunge zvinoita sekuti hutachiona hwakanyanya ziso pane vanhu vane mukurumbira (vezvematongerwo enyika, vaimbi, vaimbi, venyeredzi dzemafirimu uye vasingataure zvakakurumbira vatambi).
Ini ndinoona izvi zvakafanana nehutachiona hwekona ini ndinofunga kuti hunosarura, sei vanhu vane mbiri chete?
23 March 2020 pa 10: 40
Maimbove nenhengo dzeNSB .. ko isu tine nhengo dzeIMB here?
23 March 2020 pa 11: 24
Kana ukanyatsotarisa, iwo mitezo yeNSB. Izvi zvinogona kutsanangura kuti sei kune vanhu vazhinji vorudzi urwu muNetherlands uye nei zviri nyore kwazvo kuti hurumende pano kuunganidza nekufadza vanhu ava, uye izvo hazvina kana mari.
MuHondo Yenyika II, maGerman dzimwe nguva vaigunun'una kuti maDutch ainyanya kubatsira mukubatsira nekutengesa vamwe vanhu vayo. Vamwe vakanyunyuta kuti nekuda kweizvi vaive nebasa rakawandisa uye vakabatikana zvakanyanya kuti varambe vachitora vatengesi ivavo.
MaDutch (kwete ese echokwadi) ane godo rakakura kwazvo kupfuura eg. MaGerman, maBelgians uye kunyangwe chiFrench, ivo havangopi mumwe munhu wechiDutch mwenje muziso, saka chii chingave chiri nani pane kutengesa vanhu vako uye nezveizvi zvakare mubairo wakanaka wekuwana, ndinofungidzira panogona kunge paine chekumirira chevanhu vanoda kuve IMB.
23 March 2020 pa 10: 18
Mumugwagwa uri chinhambwe ndakaona vaviri vakabatirana maoko uye vachitsvodana (hapana chakaipa nazvo) sezvinoita njiva, mukomana nemusikana.
Mukadzi akapfuudza vaviri vacho uye ini ndikamunzwa achiti, ucharega izvozvo uye mukomana wemurume nemukadzi akavhunduka akabvunza kuti chii chaiitika. Iye akadaro, achipopota: "Iwe unoziva kuti haufanirwe kunge wakapenga." Mukomana: "ma'am dzikama, hapana zvekunetsekana nezvazvo". mukadzi akatanga kushushikana uye akatanga kutuka, zvaigona kunge zvave kubva kunze kweruoko, vaviri vacho vakanyarara vachienderera mberi nerwendo, mukadzi akamira.
Teererai zvishoma kune mumwe nemumwe
23 March 2020 pa 11: 16
Iyo mister smith athari mukuita, kana ndiani anoziva, iye mukadzi anotapira inhengo yemazuva ano yeNSB (inozivikanwawo pasi peiyo zita rekushanda inofficieller mitarbeiter).
23 March 2020 pa 11: 07
Mabhanga akavharwa muguta rangu nhasi (test run? Kuti uone zvinoita vanhu)?
Ini ndinotarisira matanho mumavhiki anouya / mwedzi ingangove yaida yakawanda Hegelian dialectics vanhu vasati vagara vakagadzirira kuzvigamuchira.
mamwe matanho andinoona (handizive kana zvikaitika asi ndinofunga anogona) nemhedzisiro yavo:
1) pini muganho pane kadhi pazuva / vhiki ye, semuenzaniso, makumi mashanu euros. (kugadzira kutya mhirizhonga uye kuita kuti vanhu vajairane)
2) kana maATMs ayo anongovhura mashoma mashoma pazuva / vhiki (kugadzira nyonganiso uye kujaira kuita Cashless)
3) kuiswa (kwechinguva chokwadi, asi mazuva ano ndeye nhaupeak yekusingaperi) kutanga kukosha mari
4) kuiswa kwemari yekutanga yekuwedzera mutero kwechinguva kuchazotungamira, semuenzaniso, 90% yeaSME / vashanyi vekugara vachiri kubudirira uye vachiwana mari yakanaka kana iye, sekutaura kwevagadziri, anoita purofiti kubva mudambudziko.
5) kutsvinya kwevanamuzvinabhizimusi vanofungidzira kuti vanoshandisa mukana wenhamo uye kuwana mari nekuti vaive vakangwara kuti vauye nemuenzaniso wakanaka wekuwana mune iyi corona hype. (Ndiri kuona izvi zvichiitika zvakanyanya pasocial media uye kuruboshwe-mapapiro emawebhu saiti)
6) Nationalization yemari yepension neindasitiri. (MaSmE anotevera kurohwa nezvirambidzo uye kuwedzera kwakanyanya kwemitero (inonzi teshi solidarity tax) zvekuti vese vanoenda kumabhanga, kusanganisira iwo makambani ayo achiri kuita mari yakanaka kunyangwe nedambudziko.
7) marudzi mazhinji ari kuwedzera kukura uye ane simba rakawanda, musika wemasheya uri kudonha zvachose. makambani ekushambadzira masheya anosimbirwa (anofungidzirwa kuti kwenguva pfupi) nehurumende uye akatengwa kubva pazviumbwa nevakagadzwa (dai vanga vasati vatova mumaoko avo).
8) Kukurumidza kuisirwa 5g yepasirese kufungidzira kuti kwakachengeteka uye kudzivirira kwakazotevera hutachiona kubuda.
23 March 2020 pa 12: 15
Kana mari yepenjeni ikasimudzwa, nyika dzinodzvanywa. Iyi ndiyo nzira yekudzikisa chikwereti chehurumende. Isu tatoona izvi munyika yakaita seHungary, umo mari yepension yakazvimirira uye chikwereti chehurumende (hama yeGDP) yakabva yangoderera. Semuenzaniso, Hurumende ichabvisa chikamu chikuru chechikwereti chavo, zvimwe zviri nani kumabhanga pane kuirega ichipera nekukwira. Chekupedzisira nekuti mabhanga haadi kuti avo vane chikwereti chemogeji vakwanise kubvisa zvikwereti zvavo nenzira iyi. Iyo midziyo ichafa nekuda kwekusabhadhara mari yerent pamwedzi uchifarira mabhangi.
23 March 2020 pa 13: 33
Kana vanhu vasingachakwanise kubhadhara mari yavo yemahofisi, mabhanga achatora.
Kana mabhanga akashurikidzwa (ona ABN AMRO), ipapo nyika ichava neyese dzimba idzo ... hunyanzvi hwekudyidzana mukugadzira.
23 March 2020 pa 13: 07
EAR chapupu chirevo:
neChishanu chapfuura ndakataura nemumwe munhu anotiza Afghan uyo anopfumisa hupfumi hweDutch samuzvinabhizimusi. Akataura nezveshamwari yakanaka kuChina. Shamwari iyi yakagariswa nemhuri (mukadzi nevana 2,5) kwemwedzi miviri. Ivo vakagamuchira mhando yevhodhi kubva kuhurumende. 3 munhu weimba anotenderwa kutenga zuva nezuva. Kubika kunofanirwa kuitirwa kune imwe nzira yekufanorongerwa kutarisa. Legitimation nefoni uye voucher. Supermarket anotenderera mukuvhura, asi kazhinji chete 1 yakavhurika. Ini ndakabvunza chii nezvebasa rake (mukusona fekitari). Nechemumoyo izvo zvakare "zvakagadziriswa". Rent nemagetsi zvaisazofanirwa kubhadharwa, vashandi vakapihwa nehurumende kuti vatenge chikafu.
Gare gare pandakanga ndiri pamba, uye ndikapora kubva pane ruzivo, mibvunzo mizhinji yandaida kubvunza. Nekudaro, mukana wekuti ini ndichakwanisa kubatana naye svondo rinouya iri kuderera zuva nezuva.
1 = hapana
imwe = hapana
Kana iwe ukabvunza mibvunzo yakakodzera, kunyanya mibvunzo inoda rondedzero inoshanda yeiyo zuva nezuva zviitiko / kuona, mufananidzo mukuru unozozviratidza. Uye zviri nyore here kupedzisa kuburikidza nekunzwisisa kana paine kutendeseka kana kwechokwadi kunyepa
Attn zzpers avo vanonyoresa kunyora masse ekubatsira rubatsiro. Mutemo weKubatanidzwa uchiri kushanda. Gamuchira muripo = ita mupiro. Kana pasina basa raunosarudza, saka pane basa. Izvo zvakare imhando yemari ... kubva pakutanga nguva, iyo feudal system kana waini nyowani mumabhegi akare?
Wana rubatsiro pamutemo? icho zvakare chinhu chekare. Dare redzimhosva (reruwa) redare rakavharwa kudzamara kwaziviswa.
isu tese tiri vamwe, batai Drift yangu, notch wink wink say no more
Kunyange zvakadaro, iyo nhamba yepashure yemvura iriko. Nekuti isuwo takatorwa nemhino. Zvisikwa zvichine mavhiki matanhatu pamberi pedu, iyo kalendari iri mavhiki matanhatu kumashure. Ona Itsjing / jaap voigt shanda uye urarame zvinoenderana nemwaka
Tevera zvisikwa uye iwe uri chaiye maitiro! On-wadhi (pa wadhi) uye kunze-wadhi (pa wadhi) kunyangwe….
Dzidziso reset!… .Kana iwe uchiri kuda kupa “rubatsiro”…
marijke akanyora kuti:
24 March 2020 pa 05: 36
Martin:… .. “Mari iyoyo inobvepi ?? `
Kunze kwekunge vazhinji vepension vava kufa, uye mari yavo yepenjeni kuhurumende yakatorerwa
uye saka mapoto emudyandigere ari kuzara (ayo anogona kubhadhara zvinhu zvakawanda….)…
pane chimwezvezve chinhu: Ini ndakaverenga nezve gumi (!) apfuura kuti idzo mhuri dzakapfuma kwazvo (dzinonzi Illuminati, Rothschilds, Rockefellers etc etc) dzakachengeta 10 2 0 DZIDZISO parutivi kubvira 0 2 0 0 nechekare! Sezvo ivo vaine pamwechete mari inodarika 7 8 5 DZIDZO (ipapo yakafungidzirwa, pamwe zvimwe zvino) ungafungidzira kuti havapotsa idzo mazana matatu ezviuru ezere. Iyo mazana matatu emakumi matatu emabhirioni sebhangi re piggy raive rekutora nyika yese, zvirikuitika nhasi. Muchinyorwa chimwe chete icho, chandakasuwa kubatana nacho, zvakanzi zvakare huwandu hwevanhu vari kunze kwemhuri idzi, saka pasi, hwaingofungidzirwa kusvika makumi mana emakumi matatu. Kuvhenekerwa saka kune makumi maviri kwakapetwa iyo mari, sehuwandu hwepasirese vanhu vari 0 mabhiriyoni vanhu.
2 0 0 trillion, kana uine 850 trillion nekudaro ndeye pittance. 2 0 0 trillion ndeye mazana maviri nemasere ane zeros, saka zviri chaizvo: 200 18 2 bhiriyoni x bhiriyoni imwe. Muchinyorwa chimwe chete ichocho zvakare chakataurwa kuti kubva muhari iyi, imwe munguva ino yekutora, imwe ichabhadhara inenge isingaverengeki Hurumende dzese dzenyika, IZVI ZVINOFANIRA kubhadhara mari yekutora iyi !!! Iko kusimbiswa kwakaiswa mune icho chinyorwa
`pane kutora ', uye IZVI zvisingaite. Chinangwa chekupedzisira chaive nesimba rekutora uku
uye mari yakanga isingakoshe.
Chinyorwa chinogona achiri kuwanikwa, asi kukumbira ruregerero kwekusave nehukama, kare kare. Chokwadi pachave nevatori venhau vanoyeuka chinyorwa ichi?
« Kana iyo yakazara coronavirus yekutsvedza inouya uye kuti inoratidzika sei: bvunzo dzekunyora neuto
Iyo Bill Gates 'quantum dots' iyo isina waya ID kadhi iyo inocherekedza kana iwe uine coronavirus uye kana iwe wakachengetedzwa »